Topnepalnews.com | ५१ देशका ३३९ विदेशीलाई देश निकाला, कुन देशका कति ? (सूची सहित)
५१ देशका ३३९ विदेशीलाई देश निकाला, कुन देशका कति ? (सूची सहित)
Posted on: January 13, 2017 | views: 944
काठमाडौं, पुस २९ । नेपाल आएका ५१ देशका ३३९ नागरिक एक वर्षमा निष्कासित गरिएका छन् । अध्यागमनसम्बन्धी अपराधमा २७७ तथा अन्य अपराधमा संलग्न ६२ विदेशीलाई अध्यागमन विभागले निष्कासन गरेको हो । गत वर्ष ३२६ विदेशी नागरिक निष्कासनमा परेका थिए । सन् २०१६ मा निष्कासन भएकामा सबैभन्दा धेरै चीनका नागरिक छन् । चिनियाँपछि अमेरिकन, पाकिस्तानी, रसियन र बंगलादेशी धेरै छन् ।
चीनका १२४, अमेरिकाका २९, बंगलादेशका १९, रसियाका १५ र पाकिस्तानका १४ नागरिक निष्कासनमा परेका छन् । त्यस्तै, बेलायतका १३, क्यानडाका १२, जर्मनीका १०, कोरिया र अस्ट्रेलियाका आठ–आठ, उज्वेकिस्तान, इटाली र इजरायलका ६/६ नागरिक निष्कासनमा परेका छन् ।
अध्यागमन विभागका अनुसार फ्रान्सका र स्विट्जरल्यान्डका पाँच–पाँच, नेदरल्यान्ड र डेनमार्कका चार–चार, पेरू र मलेसियाका तीन–तीन नागरिक निष्कासित भएका छन् । ताइवान, न्युजिल्यान्ड, पोर्चुगल, साउदी अरेबिया, पोल्यान्ड र इरानका दुई–दुई नागरिक निकालिएको विभागले जनाएको छ ।
श्रीलंका, टर्की, युक्रेन, केन्या, बुल्गेरिया, बहराइन, अस्ट्रिया, जापान, इन्डोनेसिया, आइभोरीकोस्ट, स्लोभाकिया, इजिप्ट, भुटान, क्रोएसिया, ट्युनिसिया, सिंगापुर, तान्जानिया, चेक रिपब्लिक, थाइल्यान्ड, माली, स्पेन, लेबनान, फिनल्यान्ड र मेक्सिकोका एक–एकजना नागरिक नेपालबाट निष्कासनमा परेको अध्यागमनले जनाएको छ ।
अध्यागमनसम्बन्धी अपराध (ओभरस्टे)मा बस्नेहरूलाई दैनिक पाँच डलरका दरले भिसा शुल्क तथा दैनिक दुई सय रुपैयाँका दरले जरिवाना असुलेर अध्यागमन विभागले निष्कासन गर्छ । ५/६ वर्षसम्म अवैध रूपमा बस्दै आएका विदेशीसमेत पक्राउ परेको र जरिवाना गरेर निष्कासन गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार ओभरस्टेमा संलग्नलाई एक वर्ष र अन्य अपराधमा संलग्नलाई १० वर्षसम्म नेपाल आउन नपाउने गरी निष्कासन गरिएको छ ।
सस्तो देश भएकाले कतिपय विदेशी नागरिक लुकेर नेपालमा बस्ने गरेको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपाने बताउँछन् । धेरै देशका नागरिकलाई अनअराइभल भिसा दिने भएकाले पनि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न विदेशीहरू लुक्न नेपाल आउने गरेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
अध्यागमनको नियम नमानेको तथा विभिन्न अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा सरकारले एक वर्षमा एक सय २४ चिनियाँ नागरिकलाई निष्कासन गरेको छ । सन् २०१६ मा ओभरस्टेमा एक सय ११ तथा अन्य अपराधमा संलग्न १३ चिनियाँ नागरिक निष्कासित भएका हुन् ।
चिनियाँ पर्यटक आगमन बढेसँगै ओभरस्टेलगायतका अपराधमा संलग्नता पनि बढ्दै गएको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानले बताए । गत वर्षदेखि चिनियाँ पर्यटकलाई नेपालमा निःशुल्क भिसा दिने निर्णय भएको थियो । नेपालमा एक वर्षमा पर्यटन भिसामा पाँच महिनाभन्दा धेरै बस्न पाइँदैन ।
केही चिनियाँ नागरिक पाँच महिनाभन्दा लामो समयसम्म नेपालमा बस्ने गर्छन् । कतिपय चिनियाँ नागरिक भने पर्यटक भिसामा विभिन्न व्यवसायमा आबद्ध भएर लामो समयसम्म बस्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई जरिवाना गराई विभागले निष्कासन गर्ने गरेको छ ।
डलर, सुन, लागुऔषध, वन्यजन्तुको अंगलगायतको कारोबारमा पनि पटकपटक चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका छन् । जेल सजाय भुक्तान गरेपछि उनीहरूलाई सरकारले निष्कासन गर्दै आएको छ ।
अन्य अपराधमा निष्कासनमा परेका ६२ मध्ये ११ लागुऔषध मुद्दाका अपराधी छन् । नौजना नक्कली पासपोर्ट प्रयोग गर्ने, १० विदेशी मुद्राको कारोबारमा संलग्न छन् । कल बाइपासको अपराधमा पक्राउ परेका ६ जना पनि निष्कासित भएका छन् आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।